Doko maimaim-poana amin'ny amonia - Angano sy fahamarinana tokony ho fantatrao | Bezzia
Raha te hanova ny lokon'ny volonao ianao rehefa miaro azy dia tsy misy toa azy loko tsy misy amoniaka. Izy ireo no ho mpandray anjara mavitrika ankehitriny, satria raha ny zava-mitranga dia misy fisalasalana manodidina azy ireo foana. Eto izahay dia hiezaka hamaha sy hahita ireo angano mahazatra indrindra sy ireo fahamarinana mitarika antsika hatoky azy ireo.
Ny loko tsy misy amoniaka dia safidy mety indrindra hanehoana loko manaitra nefa mandrakariva, hamelombelona ny volo, avela mihoatra ny voajanahary sy karakaraina, miaraka amin'izay. handrakotra volo fotsy. Te hahafantatra ve ianao hoe iza no marika tsara indrindra eny an-tsena amin'izany rehetra izany? Jereo eto!.
1 Doko, angano ary fahamarinana tsy misy amonia
2 Inona avy ireo loko tsy misy amoniaka tokony ho fidiko?
Doko, angano ary fahamarinana tsy misy amonia
Rehefa mazava fa te-hametaka loko, dia efa manana ny làlana. Mazava ho azy fa hisy iray hafa ho avy izay hahatonga antsika hisalasala karazana loko inona no hampiasaintsika. Tsy isalasalana fa tokony holazaina fa ny loko tsy misy amônika dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra. Raha mbola tsy azonao antoka dia tadiavo ireo angano sy fahamarinana ao aminy:
Zanaka ny tsara indrindra ho an'ny volo: ity dia iray amin'ireo fahamarinana lehibe. Ireo karazan-doko ireo dia misy fotony tena mahazaka. Amin'izany dia tsy manasazy ny volo toy ny loko mahazatra izy ireo. Noho izany, afaka mankafy fiovana be isika nefa tsy manimba ny volo araka ny eritreretintsika.
Manarona volo fotsy ve izy ireo?: Ny iray amin'ireo angano momba ny loko tsy misy amoniaka dia ny fiheverantsika rehetra fa tsy manarona volo fotsy izy ireo. Tsy marina tanteraka izany. Betsaka ny lehibe marika mandoko efa manana fahalavorariana amin'ny volo fotsy izy ireo. Azon'izy ireo atao ny mandrakotra azy ireo mandritra ny fotoana lava kokoa noho ny eritreretintsika.
Hamafin'ny loko- Angamba vehivavy maro no mieritreritra fa tsy misy amoniaka dia tsy hamirapiratra toy ny loko hafa ny loko. Tsy misy afa-tsy angano satria maro loko ny trano be ary mamirapiratra sy manokana ny tsirairay. Ankoatr'izay dia tsy manjavona isaky ny manasa izy io.
Mamiratra amin'ny volo?: Eny, amin'ity karazana loko ity dia hanana taratra mazava be ianao. Zavatra izay sarotra eritreretina indraindray. Ho fanampin'izay, hanana tombony isika fa ho toa mahazatra azy ireo mihitsy aza ny volo voajanahary amin'ny ankamaroan'ny loko atolotry ny trano antsika.
Palety loko: vehivavy hafa mino fa somary zara raha misy ny paleta miloko amin'ireny loko ireny. Iray amin'ireo angano lehibe. Hanana iray isan-karazany sy be dia be isika. Ny feo amin'ny karazany rehetra manomboka amin'ny blondy ka hatramin'ny chestnut, volamena ary mena, satria ny karazany ny tsiro.
Inona avy ireo loko tsy misy amoniaka tokony ho fidiko?
Ny volo tsirairay dia samy manana ny filàny avy. Hany ka eo amin'ny tsena dia manana tolotra vitsivitsy vonona ny handrakotra izay rehetra angatahinay isika. Azo antoka fa fantatrao ny trano mandoko malaza:
Ny tena izy: izy dia iray amin'ireo marika lehibe. Ho fanampin'izay, ao anatin'ny faritra tsy misy amoniaka, dia manome antsika a fandrakofana volondavenona fatratra. Ho fanampin'izany, afaka mahita alokaloka maro mifanaraka amin'ny zavatra tadiavintsika isika. Raha lava volo ianao, dia io no loko tsara indrindra azonao amin'ny vola entiny.
Llongueras: iray hafa izay tsy azontsika hadino. Tsy isalasalana fa loko iray izay hikarakara tsara ny volontsika koa, handrakotra ny volo fotsy miaraka amin'ny loko falifaly izay maharitra ela kokoa.
Wella: ny loko an'ity marika ity dia manana tanjaka tena tsara, ao anatin'ny isan-karazany ny loko. Ny tokony hataonao ao an-tsaina dia ny tsy handrakofana tsara ny volo fotsy.
Izany no antony raha vitsy fotsiny ianao volo vitsy fotsy, eny ho tonga lafatra ho anao izy. Zavatra tsy soso-kevitra raha ny volo fotsy no tena mahery fo.
Garnier: ity marika ity dia manana Nutrisse ary mazava ho azy, io no manome antsika ny tsara indrindra sakafo ara-bolo. Eto isika dia afaka misafidy loko sy loko maro, miaraka amin'ny famaranana tena mamirapiratra. Averina indray, ny volo fotsy dia tsy hosaronana tanteraka.
Tsy misy isalasalana fa miloka amin'izy ireo ireo marika lehibe, ka tsy ho latsa-danja kokoa izahay. SASANY loko tonga lafatra izay ahitantsika ireo famaranana mitovy amin'ny loko mahazatra. Na dia tsy misy fisalasalana aza dia hanana tombony bebe kokoa sy izay voajanahary indrindra isika. Inona koa no mbola angatahintsika?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Angano sy fahamarinana momba ny loko tsy misy amoniaka tokony ho fantatrao
Betty dia hoy izy:
Satria ny loko misy ny fanasana dia miova volomboasary foana ary tsy te handoko ny tenako Tiako ny lokoko voajanahary fa ity ratsy tarehy, mainty ny faka ary ny ambiny voasary voasary azoko atao dia tsara ireo loko tsy misy amoniaka azafady. Misaotra anao
Valiny tamin'i Betty
Jeniffer cordova dia hoy izy:
Salama tiako ho fantatra any aoriana fa manitsy aho.
Ny fanontaniako dia?
Hafiriana no tokony hiandrasako hampijaliana ny voloko mainty. Fa tsy haiko hoe iza no tsara kokoa
Satria nandoko ny voloko aho rehefa avy nahitsy fa tamin'ny fanasana voalohany dia nidina daholo ny loko mainty nanaovako
Misaotra anao aho fa afaka mamaly ahy ianao
Mamaly an'i Jeniffer cordova
Fantatrao raha azo ampiharina amin'ny volo nolokoana loko amoniaka izy ireo? MISAOTRA
Ny valin'ny fanontanianao dia hoe azo ampiasaina izy ireo. Raha vao avy nandoko ianao dia tsara kokoa ny miandry herinandro vitsivitsy vao miala sasatra ny volonao. Etsy ankilany, tadidio fa ny loko TSY MISY amoniaka dia mitandrina kokoa amin'ny volo, dia hanome azy hamirapiratra sy loko voajanahary kokoa io. Ka rehefa mila fanovana mahery vaika kokoa isika dia tsy mifidy azy ireo matetika. Na dia marina aza fa marobe ny marika manome antsika loko vaovao hodinihina. Ny maha voajanahary kokoa azy ireo dia tsy hanimba ny volo loatra izy ireo, ka safidy tsara foana izany.
Manantena aho fa nanampy!
Miarahaba ary misaotra betsaka anao tamin'ny hevitrao.
London Fashion Week, lohataona-fahavaratra 2017 mampiseho